Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » 2021 Magaalooyinka Ugu Wanaagsan ee Mareykanka
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Meel kasta oo Ameerika ah kama heli doontid goobo cagaaran oo saaxiibtinimo leh, oo haddii aad sidaas samayso, kulligood ma noqon doonaan sanbuur.
San Francisco waxay awooddeeda ka sarraysaa inta kale ee xudduudda eey-park ee Ameerika sida No.1 ee Dog Park City ee ugu Fiican.
Boise, Portland, iyo Henderson waxay ku faanaan saddexda tirooyin ee ugu sarreeya jardiinooyinka eyda ee Maraykanka marka la isku hagaajiyo cabbirka dadka.
Magaalooyinka ugu waawayn Lone Star State waxay ku dhammaystaan ​​qiimeynta iyagoo dabohoodu u dhexeeyaan lugahooda.
Jardiinooyinka eeygu waa meelo ku fiican dhallaanka - iyo milkiilayaashooda - inay ku kulmaan. Inkastoo ilmahooda dhogorta ahi ay si xor ah u dhex mushaaxaan oo ay saaxiibo sameeyaan, hooyada iyo aabbaha waxay la falgali karaan dadka eyga jecel.
Laakiin meel kasta oo cagaaran ka heli maysid meelaha cagaaran ee ardaydu ku habboon tahay America, oo haddaad sidaas samayso, dhammaantood ma noqon doonaan sanbuur. Haddaba maxay yihiin 2021 Magaalooyinka Dog Park ee ugu Fiican?
Khubaradu waxay galeen kaalinta 97 US magaalooyinka ku salaysan helitaanka, tayada, iyo isirrada cimilada si loo ogaado.
Eeg 10 -ka magaalo ee hoggaamiya (iyo 10 -ka dib u dhaca) baakadda hoose, oo ay ku xigto xoogaa tilmaamid ah iyo iftiiminno ka mid ah warbixinta.
Magaalooyinka Beerta Eeyga ugu Fiican 2021
Magaalooyinka Xadiiqadda Dog ee ugu xun 2021
San Francisco: Hogaamiyaha Xidhmada: Magaalada Dahabka ah waxay ku xoog badan tahay inta kale ee xarumihii beer-eyda ee Ameerika sida lambarka 1 ee Dog Park City ee ugu Fiican.
Eeyadu si cad bay halkan ugu yihiin saaxiibka ugu fiican ragga/dumarka Markaa waa wax iska dabiici ah in magaaladu ay meel cagaaran u hibeyn doonto mid ka mid ah dadka ugu badan. Dhab ahaantii, Magaalada Dahabka ah waxay ka sarreysaa 92 magaalo oo kale oo ah tiro beero-eey ah 100,000 (laba-lugood) deggan.
Lammaanaha leh waxqabadka xiddiglaha ah ee Helitaanka (Maya. 5) oo leh jawi deggan (No. 8), iyo San Francisco waxay si sahal ah ku kasbataa geeskeeda nuska ah ee Oakland si ay ugu duudduubto kaalinta koowaad. Magaaladani waxay u qaadataa jaceylka ubadka heer cusub oo dhan.
Galbeedka Bandhigga: San Francisco ma aha magaalada kaliya ee reer galbeedka ah ee xata iftiiminta qiimeyntayada. Afar magaalo oo Kaliforniya ah, oo ay weheliso Portland, Oregon, oo ku taal No. 3, Boise, Idaho, No. 4, iyo Henderson, Nevada, No.
Sidee reer galbeedku ugu guuleysteen tartanka? Magaalooyinka ugu waawayn ee California waxay ku fuulaan cimiladooda nooca Mediterranean-ka ah-waxay ku habboon yihiin raaxo, booqashooyinka sanadka oo dhan ee beerta eyga. Boise, Portland, iyo Henderson, dhanka kale, waxay ku faanaan saddexda tirooyin ee ugu sarreeya jardiinooyinka eyda ee dalka marka la isku hagaajiyo tirada dadka. La noolow wehelkaaga canine mid ka mid ah magaalooyinkaas, waxaadna korin doontaa hal arday oo xumaaday.
Magaalooyinka Texas ee Doghouse: Magaalooyinka ugu waawayn Lone Star State waxay ku dhammaystaan ​​qiimeynta iyagoo dabohoodu u dhexeeyaan lugahooda. Lambarka 41, El Paso ayaa ugu sarreysa magaalooyinka Texas.
Nasiib darro, shan magaalo oo Texas ah ayaa soo degay 10ka ugu hooseeya, oo ay ku jiraan Fort Worth, Arlington, iyo Plano 88th ilaa 90th meelood, siday u kala horreeyaan, iyo Garland 95th. Laredo ayaa ugu dambaysa.
Maxaa ka dhigaya muujinta liidata? Helitaan la'aanta jardiinooyinka eyda ayaa inta badan la eedeeyaa. Laredo, sidoo kale waa tayada jardiinada dhexdhexaadka ah oo liidata - kuwa ugu liita, dhab ahaantii, magaalooyinka aan cabbirnay. Bad, Texas!